Wasiir Cawad oo la kulmay Jaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiir Cawad oo la kulmay Jaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka
Wasiir Cawad oo la kulmay Jaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Federaalka Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa magaalada Minneapolis Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Mudane Amb. Ahmed Ciise Cawad ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed,qaybaheeda kala duwan & Madaxda Gobolka Minnesota,wuxuuna wasiirku uga war-bixiyey xaaladda dalka & guulaha laga gaaray arrimaha Siyaasadda,Ganacsiga & xariirka caalamiga ah.
Xaamud Maasheeye Wasiiru dowlahihi hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdii uu gar wadeenka ka ahaa Madaxweyne Sheikh Shariif ayaan wax ka waydiiyey kullanka.
Khadiijo Cali oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee Gobolka Minnesota kana tirsan hay’adda Global Minnesota ayaa war-baahinta qaranka uga war bixisay sababta ku dhalisay shirkaan uu martida ku ahaa Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Federaalka Somalia.
Ugu danbayntii wasiirka ayaa Xusay doorka ay jaaliyadda Soomaaliyeed ku leedahay dib-u-dhiska Somalia,kulana dar-daarmay in ay tallo,Toosin & tabarucaadba uga qayb-qaataan kalin mug & miisn ba leh.
Abdihakim Abdi Ismail Warbahinta Qaranka Minnesota Mareykanka.
Previous articleDuqa Muqdisho oo dhagax dhigay dhismaha waddada isgoosyada Siinaay iyo Baar-Ayaan
Next articleMadaxweyne kuxigeenka Puntland oo boqday Deegaanka Al-Shabaab laga xoreeyey ee Af-urur